Nzira yekutsvaga injini yekugadzirisa inobatsira sei kutarisira hoteli?
Kutsvaga injini yekugadzirisa kunokosha kune rimwe bhizinesi rekutsvaga kana iri bhizinesi rekuda kana basa guru. Kana iwe uri muridzi wehotera duku muguta rako, iva nechokwadi chokuti vagari vemo, pamwe chete nevashanyi, vanoziva nezvazvo. Nzira yakanakisisa yokuvandudza kukoshesa kwekutsvaga kwekutsvaga kwehotera ndeyokutanga shanduro uye kuigadzirisa maererano nezvose zvinotsvaga injini. Imwe michina yekutsvaga kutsvaga kugadziriswa ichakubatsira kuti usangane nechinangwa chebhizimisi rako nekusimudza kudzokera kunekutsvaga (ROI).
Maererano nehuwandu hwemashoko, mawebsite anotsanangurwa papeji yekutanga yeGoogle tsvaga inobudisa zvikamu zvinenge 92% zvezvinhu zvose (organic) traffic. Paunotamira kune peji yepiri yekutsvakurudza peji, motokari yakaderera ne 95%, uye ne80% uye 60% pamapeji anotevera. "Zvakare, vashandisi havasati vasvhura mapeji e4 ne5 eSERP sezvavanokwevera mawebhusayithi akaiswa ipapo seasina kuvimbika uye akakodzera. Izvo zvakanyatsonaka sezvo Google yakashandura algorithm yakagadzirirwa kuratidza mapepa ewebhu akakodzera pane pekutanga peSERP peji. Zvinoreva kuti kana webhusaiti yako yepahotera isingaoneki peji yekutanga yeSERP, mikana yevashandi ichawana yako web source inopfuura 6%.
Ndezvipi zvinobatsira zvekuchengetedza kweSeO kwewebsite yangu yepahotera?
Chokutanga pane zvose, kuburikidza nekupa hutano hwehutano hwehutano, unowana mukana wekugara mberi kwevatengesi vako vemakwikwi emakethe uyezve kaviri mari yako. Uyezve, webhusaiti yakagadzirwa zvakanaka uye inoyevedza inogona kusimbisa kutenderera kwehotera nekuvandudza mararamiro ako. Vanhu vanogona kutarisa dzimba vasati vaita urongwa vachava vakavimbika kwauri. Uye pakupedzisira, nekuwedzera nzira kuenda kunzvimbo yako, iwe uchasimudza kutengesa kwako uye kuita kuti hoteri yako yebhizimisi ibudirire.
Mazano ekuvandudza nzvimbo yepaIndaneti kuonekwa paSERP
Pane nzira dzakawanda dzingaratidza sei kuti iwe ungasimudza bhizimisi rako rebhizimisi rebhizimusi. Muchikamu chino, tinoshandisa simba rekugadzirisa nzvimbo yako yekutengesa uye kutengesa.
Quality real photos
Vanhu vanosarudza hotera nemifananidzo yaunopa kwavari. Vafambi vanotanga kutsvaga kwavo nekutsvaga mambure ehotera dzakanaka uye dzakanaka kuti dzigare. Vanoongorora hutano hwepahotera kuburikidza nemifananidzo yakagadziriswa yepamusoro uye dzimwe nguva nevhidhiyo yekutengeswa kana pane. Iva nechokwadi chekuti iwe unopa vashandi vako vanogona nemifananidzo yakakwirira yehotera dzenyu, nzvimbo yekutambira iri kunze kwenzvimbo, hovha, nemabhadha. Uyezve, chenjerera pamusoro pekugadzirisa mapikicha ako sezvo pane nyaya dzakawanda zvisati zvaitika apo vafambi vakanzwa vachinyengedzwa nokuti mifananidzo inowanikwa pane webhusaiti yepamusoro iri kure nezvakanaka.
Muchiteshi chepahotera, nyaya dzakanaka dzehotera dzakagadzirirwa INOTENDA! Iwe unofanirwa kutaurira nyaya inobatanidza kune vanogona kuti vatengi kuti vavamanikidze kuti vaite bhuku newe. Zvinokurudzirwa kugadzira mutungamiri wefambi (e. g. tsanangura zvitsuwa zvinosvika pedyo kana kuita migwagwa yevashanyi mhiri kweguta). Hazvina kukwana kutaura kuti hoteli yako yakaiswa pamwoyo weguta racho. Iwe unoda kusimudza kufarira kwevanhu iwe neweguta rako.
se Facebook, Google+, Instagram, uye Twitter. Ichinobatsira kusimudzira mararamiro ako uye kuvandudza mararamiro ako paGoogle nezvimwe zvinjini. Iva nechokwadi chekuti iwe unofadza uye yakajeka nhoroondo dzevanhu munharaunda apo vanhu vanogona kugovera maonero avo pamusoro pehotera rako uye vanokubvunza chero mibvunzo inobata ivo Source .